Shirkii Wadatashiga wacyi geinta iyo waxbaridda cod bixiyaha oo maanta soo xirmay – GMDQ
+252 616 385 278
Shirkii Wadatashiga wacyi geinta iyo waxbaridda cod bixiyaha oo maanta soo xirmay
Shir weynihii looga arrinsanaayay qorsheynta iyo hirgelinta manhajka wacyi gelinta iyo waxbaridda cod bixiyaha ayaa maanta la soo gebagebeeyay. Shirka oo 2 cisho socday ayaa munaasabaddii lagu xirayay waxaa ka soo qaby galay guddoomiyaha Guddiga marwo Xaliima Yareey iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir Eng. Cabdiraxmaan Yiriisow.
Shirka wadatashiga ah ayaa waxaa ka soo qayb galay hay’adaha waxbarashada, bulshada rayidka, saxaafadda, ururada dhalliyarada iyo haweenka iyo hay’adaha dowladda oo ay ka mid yihiin wasaaradaha waxbarashada, haweenka iyo warfaafinta, akademiyada cilmiga iyo suugaanta iyo jaamacadda ummadda. Waxaa sidoo kale shirka ka soo qayb galay xubno matalayay naafada Soomaaliyeed.
Labada maalin ee uu wadatashigan socday ayaa waxaa la isku dhaafsada fikrado waxgal ah oo qiima badan kuwaas oo Guddiga doorashooyinku uu qorsheynaayo in ay aasaas u noqdaan wacyi gelinta iyo waxbaridda cod bixiyaasha Soomaaliyeed ee la qorsheynayo in dhowaan si baaxad leh looga fuliyo dhammaan waddanka.
Guddigu waxa uu sidoo kale qorsheynayaa in kulamo wadatashi ah oo kan maanta Muqdisho lagu soo xiray la mid ah lagu qabto dhammaan maamul goboleedyada dalka.
Waxaa la faafiyey June 10, 2018 August 16, 2018